अचानक मोटोपन बढ्नुका कारणहरु । - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 11:00
यदि तपाईंले आफ्नो डाइटमा सामान्य दिनहरुमा भन्दा बढि क्यालोरीहरू खपत गर्न सुरु गर्नुभयो वा यदि तपाईंले व्यायाम गर्न छोड्नु भएको छ र आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू पनि गर्नुहुदैन भने, तब तपाईंको वजन बढ्न थाल्छ। यसमा कुनै आश्चर्र्यजनक छैन। तर तपाइले पहिले गरेजस्तै सबै काम गरिरहनु भएको छ र यसको बाबजुद पनि तपाईको वजन बढिरहेको छ?
अनजान वा अचानकमा वजन बढ्ने समस्या त्यतिबेला हुन्छ जब तपाईं वजन बढाउन केहि गर्नुहुन्न, न खाने बानीमा परिवर्तन, न व्यायाम तर तैपनि तपाईको वजन बढ्न थाल्दछ। यस्तो समस्या शरिरमा कहिलेकाँही वाटर रिटेन्सन, असामान्य वृद्धि, कब्जीयत, तनाव, केही रोग, कुनै औषधि सेवन, आदि को कारण हुन सक्छ। अनजान वा थाहा नपायर वजन बढ्ने समस्या हुन सक्छ।
अचानक वजन बढ्नु कुनै रोग वा स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित छैन, निम्न सामान्य कारणहरू हुन सक्छन।
अधिक खाना खाने गर्दा
प्रीमेनोपज र मेनोपज
बुढेसकालसँगै मेटाबोलिजमको प्रक्रिया ढिला हुने गर्दा
शारीरिक रूपमा कम सक्रिय हुदाँ
डिहाईड्रेसन वा अधिक नुनको कारण शरीरमा वाटर रिटेन्सन
तनाव, डिप्रेसन, वा चिन्ता
यदि कुनै समयमा तपाईलाई अचानक वजन कुनै सामान्य कारण बिना नै द्रुत गतिमा बढ्दै छ भन्ने महसुश भएको छ भने यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् किनकि कहिलेकाँहि बिमारीको कारण वा औषधीको सेवनको कारण पनि, अचानक वजन बढ्न थाल्छः
अचानक वजन बढ्नुका कारणहरु।
१.अचानक वजन बढ्नुको कारण हो हाइपोथायरायडिज्म।
यदि तपाईंको घाँटीमा थाइरोइड ग्रंथिले पर्याप्त मात्रामा थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गरेको छैन र तपाईंको शरीरमा थाइरोइडको कमी छ भने त्यसलाई चिकित्सको भाषामा हाइपोथायरायडिजम भनिन्छ। यसको कारणलेपनि तपाइको वजन अचानक बढ्न सक्छ। यस रोगको कारण वजन बढ्नुका साथै थकित महसुस, कमजोरी र चिसो लाग्दछ। वास्तवमा, जब शरीरमा थाइरोइड हार्मोनको कमी हुन्छ, तब मेटाबोलिज्मको प्रक्रिया पनि ढिलो हुन्छ जसले गर्दा तौल बढ्दै जान्छ। सही औषधीको साथ हाइपोथायरायडिजमको उपचार गरेर बढेको तौल घटाउन सकिन्छ।
२.निन्द्राको कमिले वजन बढ्दछ।
अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि निद्राको कमीले पनि वजन बढाउन सक्छ। यदि निद्रामा कुनै परिवर्तन आएको छ भने, त्यसले व्यक्तिको खाना बानी र मुड परिवर्तन हुन्छ जसको कारण मानिसहरूले बढी खान सुरु गर्दछन्। २०१३ को अध्ययनका लेखकहरूले पत्ता लगाएका थिएकि निन्द्राबाट वंचित व्यक्तिहरूले उनीहरूको ऊर्जाको आवश्यकताहरू पूरा गर्न बढी कार्बोहाइड्रेट खान्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको वजन बढ्छ।
३.पिसिओडि को कारण वजन बढ्छ।
जो महिलाहरुलाई पोलीसिस्टिक ओभरि सिन्ड्रोमको समस्या छ उनिहरुको तौल तिव्र रुपमा बढ्न थाल्दछ। पिसिओडिको समस्या हुदाँ, महिलाको अंडाशयले असाधारण रूपमा उच्च मात्रामा सेक्स हार्मोनहरू उत्पादन गर्न शुरू गर्दछ। पीसीओडीले वजन बढाउने साथसाथै, छाती,पेट र पछाडिको भागमा बढि कपाल, कपाल झर्नु वा धेरै पातलो कपाल, घाँटी, स्तन र काखीमा र्डाक पैचेज जस्ता समस्या गराउँदछ।
४.कुशिंगको सिन्ड्रोमको कारण अचानक वजन बढ्दछ।
वजन बढनु कुशिंग सिन्ड्रोमको साधारण लक्षण हो। यो रोग त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ जब व्यक्तिको अधिक तनाव हर्मोन कोर्टिसोलको सम्पर्कमा आउँछ, जसको कारण वजन बढनुका साथै अन्य थुप्रै असामान्यता समस्याहरू हुन्छन्। यदि तपाईं दम, गाथा, वा ल्युपस जस्ता रोगहरूको लागि स्टेरोइड लिनुहुन्छ भने, तपाईं कुशिंग सिन्ड्रोमको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। कुशिंग सिन्ड्रोम को समस्या त्यति बेला पनि हुन सक्छ जब तपाईंको एड्रेनल ग्रंथि (एड्रेनालाईन ग्रंथि) ले धेरै कोर्टिसोल उत्पादन गर्न थाल्छ, वा यो ट्यूमरसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। कुशिंग सिन्ड्रोको कारण, बढेको तौल सामान्यतया अनुहार, घाँटी, माथिल्लो पिठ्यु, वा कम्मरको वरिपरि देखा पर्दछ।
५.किडनी रोगको कारण अचानक वजन बढ्न थाल्छ।
अचानक वजन बढ्नु शरिरमा मिर्गौला सँग सम्बन्धित रोग जस्तै किड्नि फेल वा नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम जस्ता कारणले पनि हुन सक्छ जसले किड्निलाई असर गर्दछ। यदि तपाईको मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने अतिरिक्त तरल पदार्थ शरीरमा जम्मा हुन थाल्छ जसको कारण वजन बढ्छ। बिग्रिएको मिर्गौलाले शरीरबाट अपशिष्ट पदार्थहरू र पानीका साथै फ्लुइडहरू राम्रोसँग हटाउँन सक्दैन र टिश्युमा जम्मा हुन थाल्छ
६.कलेजो सिरोसिसको कारण अचानक वजन बढ्न थाल्छ।
यदि अचानक वजन बढ्यो र पेट ठूलो देखिन्छ भने, यो कलेजो सिरोसिसको संकेत हुन सक्छ। जब कलेजो कुनै कारणले क्षतिग्रस्त छ, दाग बस्ने र विभिन्न समस्या हुन्छ र कलेजोले राम्रो सँग काम गर्दैन। यसले पेटमा तरल पदार्थ संकलन गर्दछ र कलेजोको कार्य गर्ने क्षमता घट्न थाल्छ। वजन घटाउनको लागी यो रोग को उपचार गर्नुपर्दछ।
७.डिम्बग्रन्थि वा ओभरिको क्यान्सरले अचानक वजन बढाउँदछ।
अचानक वा अस्पष्ट वजन र पेट फूल्ने डिम्बग्रन्थि क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ। यसले तौल बढ्नुको साथै पेट दुखाइ, निद्रामा कठिनाई, बारम्बार पिशाब लाग्ने, अनियमित मासिक चक्र र अपचको लक्षण जस्ता लक्षणहरू निम्त्याउछन। डिम्बग्रंथि क्यान्सरको अधिकतम केसहरू पछिल्लो वा अन्तिम चरणमा मा मात्र पत्ता लाग्छ। तसर्थ, कनै महिलाले पेल्विक क्षेत्र मा असामान्य पीडा अनुभव हुन्छ भने चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नु पर्छ।
८.तनावको कारण वजन पनि बढ्छ।
जब हाम्रो काम र जीवनसँग सम्बन्धित मागहरू शरीरको क्षमता भन्दा बढि हुन्छ, तब हाम्रो शरीरले यसलाई रोक्नको लागि उपायहरू खोजी गर्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा शरीरले कोर्टिसोल,स्ट्रेस हार्मोन रिलीज गर्दछ, जसले भोक बढाउछ र पक्कै पनि हामी तनावको समयमा उच्च क्यालोरीयुक्त खाना खान्छौं। यो संयोजन, अर्थात अधिक तनाव ले गर्दा अधिक खानाको कारण वजन बढ्ने गर्दछ।
९.औषधिहरूको सेवनले पनि अचानक वजन बढाउन सक्छ।
माइग्रेन, उच्च रक्तचाप र मधुमेह, आदीको उपचार गर्नको लागी दिईने औषधिहरुमा यसको फाइदा साथै साइड इफेक्ट पनि रहेको हुन्छ जसले बिरामीको वजन बढाउँछ। थप रूपमा, एन्टीइन्फ्लेमेन्टरि स्टेरोइडहरू र डिप्रेसन कम गर्न प्रयोग गरिने औषधी पनि वजन बढाउन जिम्मेवार हुन सक्छ। यस कारण कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्दा डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस् र औषधि को बारे मा चर्चा गर्नुहोस् जसले तपाइँको रोगलाई पनि निको पार्छ र त्यसमा कम साइड इफेक्ट पनि होस।
१०.धूम्रपान छोड्दा पनि वजन बढ्न सक्छ।
चुरोट पिउँने, वा यस्तै तम्बाकुजन्य पर्दाथको खाने बानी छोड्दा सुरुमा तौल बढ्ने गर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार यो २ वटा कारणले हुन्छ। पहिलो निकोटीनले भोक कम गर्छ र दोस्रो लक्षण यसले अचानक चुरोत छोडेपछि मनमा खुलदुलि र तनाव समावेश गर्दछ जसले गर्दा व्यक्तिले अधिक खाना खान सुरु गर्दछ। यसमा गरिएको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि धूम्रपान गर्ने बानी छोडेमा, पहिलो महिनामा औसत १ किलोग्राम वजन बढ्छ। व्यक्तिको तौल धुम्रपान छोडे पछि ३ महिना सम्म औषत दरमा बढ्दछ ६ महिना पछि वजन बढ्ने प्रक्रिया कम हुन थाल्छ।
वजन घटाउनका लागि बिहानको व्यायाम बढी लाभदायक हुन्छ।
खानामा यी पाँच चीजहरू समावेश गरेर छिटो तौल घटाउनुहोस्।
यी ५ सूपहरूले तपाईंको वजन घटाउन मद्दत गर्दछ।
वीर्य अभावको लक्षणहरु र यसका उपचारहरु जान्नुहोस् ।
के प्रत्येक दिन सेक्स गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ ?
शुक्राणु को मात्रा बढाउनका लागि घरेलु उपचारहरू।
के हो त वजाइनल इन्फेक्सन र यसबारे बच्ने उपाय जान्नुहोस्...
सेक्स पावर बढाउँने ५ खानेकुराहरू।